'कबड्डी प्रति विश्वास बढेको छ' दयाहाङ
‘कबड्डी प्रति विश्वास बढेको छ’ दयाहाङ
प्रकाशित : आइतबार, असार ०८, २०७६१४:४५
तस्वीर निरज पन्थी
फिल्म । आउँदो भाद्र १३ गते रिलिज हुने चर्चा रहेको फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को छायाँकन सकिएको छ । एक गीत बाँकी राख्दै हिमाली भेगबाट टोलि काठमाण्डू फर्किसकेको छ । हिमाली भेगको कथा बोल्ने फिल्म ‘कबड्डी’ को तेस्रो सिरिज हो । यसपटक फिल्ममा नयाँ सदस्यको रुपमा कर्मा र विल्सन बिक्रम राई भित्रिएका छन् भने फिल्मलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका छन् । यो फिल्मको अघिल्ला दुई सिरिज पनि उनैले निर्देशन गरेका थिए । निर्देशक गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाको कथामा फिल्म बनेको छ ।
बासुरी फिल्मस्को निर्माण, सिनेमा आर्टको प्रस्तुति, माउण्टेन स्टोरिज र नौमती इन्टरटेन्मेन्टको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको ‘कबड्डी’ को तेस्रो सिरिज स्वजातिय विवाह र अन्तर्जातिय प्रेम सम्बन्धको अन्तरद्वन्द्वको कथामा आधारित रहने बताइएको छ । फिल्मको छायाँकन सकिएपछि दया दर्शकको माया पाउनेमा विश्वस्त छन् । ‘शुटिङ अगाडी केहि डर थियो तर अहिले विश्वास बढेको छ’ उनले भने । उनले व्यावसायिक आँकडासंगै दर्शकको विश्वास पनि महत्वपूर्ण भएकोमा जोड दिए ।
फिल्ममा नायिकाको रुपमा नयाँ अनुहार उपासना सिंह ठकुरी भित्रिएकी छिन् । फिल्ममा नयाँ अनुहार कर्मा , विल्सन र उपासनासँगै दयाहाङ राई , रिश्मा गुरुङ, माओत्से गुरुङ, पुस्कर गुरुङ, कविता आले, विल्सन विक्रम राई, लुनिभा तुलाधर, विजय बराल, बुद्धि तामाङ, कमलमणी नेपाल, अरुणा कार्कीलगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहनेछ ।
फिल्ममा शैलेन्द्र डि. कार्कीको छायांकन तथा निमेश श्रेष्ठको सम्पादन रहनेछ । यस फिल्मको निर्मातामा मणीराम पोखरेल, अर्जुन कार्की, ओमचन्द्र रौनियार छन् भने, रुदेना साडा लेप्चा सह-निर्माताको रुपमा छन् । यसमा रोहित शाक्यको पाश्र्व संगीत रहनेछ । फिल्ममा सुलभ पहारी, याम भण्डारी, किरण लिम्बु सहायक निर्देशक र सिजन दाहाल, क्रिस लामा मुख्य सहायक निर्देशकको रुपमा छन् ।
धनाको ‘बधाई’ सार्वजनिक (भिडियो)
शहिदलाई साउथकै रिमेक अफर
युवापुस्ताले रिलेट गर्ने फिल्म ‘हृदय भरी’
‘आवाज उठाउँएको हुँ ‘
रमेशको नयाँ गित ‘घरमा मेरो बिहेको करकर'(भिडियो)
‘दर्शकको सन्तुष्टि हाम्रो ठुलो कमाइ हो’ निर्देशक भट्टराई
अनमोल र प्रदीपको भिडन्त ?
केकिलाई मिल्यो राहत
चिनियाँ एक्ट्रेस सु बनिन् भ्रमण वर्षको सद्भावना दूत
सलमान फर्किए आफ्नै लयमा
‘जीवन काँडा कि फूल’ कार्तिक २२ मा
‘सरौतो’ ट्रेलरमा सुमीको बदला (भिडियो)
सिक्वेलबाट निर्माता आउट
‘बादशाह जुट’ लाई मुस्लिम संघको पत्र
दयालाई निश्चलको प्रश्न ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ ले कति कमायो ?
टोनी कक्करले काठमाण्डौलाई झुमाउने